Steam Game Mutambo: yatove nezuva! Iwe haugone kuchipotsa | Linux Vakapindwa muropa
Steam Game Mutambo: yatove nezuva!
Isaac | | Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Linux Mitambo, chiutsi
Steam Game Mutambo yakapedza yayo yekupedzisira edition muna Gumiguru. Izvo zvakatanga seValve chirongwa chakadzokororwa gore rimwe nerimwe nekuda kwekubudirira kwayo, uye kunyangwe nemhando dzinoverengeka dzegore. Ichi chiitiko chave chiine musi wekuti "urarame" online uye unounza vanogadzira uye vatambi padyo kune avo madhemoni kuti vakwanise kuyedza izvo zvitsva munyika yekutamba.
Iyo Steamworks Boka yakazivisa zuva reinotevera Steam Mitambo Mutambo, uye ichatanga musi Kukadzi 3 kubva ku2021. Ndiro zuva raunofanira kutara pakarenda yako. Zvakare, hazvizove zvenguva pfupi sezvaunofunga, nekuti ichagara kusvika Kukadzi 9. Mazuva mashoma makuru ekuvimbiswa kwedhijitari kwausingakwanise kupotsa.
Para vagadziri, Nguva yekupedzisira yekuendesa mademo ebasa ravo ichave Zvita 2, 2020 na11: 59 PM kusvika Zvita 3, 2020 na7: 59AM UTC. Uye mitambo mitsva yemavhidhiyo yakaratidzwa kunze kweiyo zuva haigashirwe.
Uye zvakare, kuti vakwanise kuratidza basa ravo, vagadziri vanofanirwa kutevedzera iyo mitemo yakasimbiswa neValve yeiyo Steam Game Mutambo:
Iva neakavimbika Steamworks yekuvandudza account.
Iva nemutambo wevhidhiyo paStam riine zuva rekuburitsa rakaiswa pakati paFebruary 10, 2021 naGunyana 1, 2021.
Iva neiyo peji rewebhu rinoonekwa pachena (Kuuya Nokukurumidza) panguva yekuzvipira kubatanidzwa.
Iva neratidziro yeruzhinji iratidzike yakagadzirira panguva iyo mutambo unotanga.
Uye kuti zita riri kutaurwa rakangotora chikamu mune imwechete Steam Game Mutambo (kudonha 2020, Kukadzi 2021, kana Chikumi 2021).
Vagadziri havana zviyero zvekutanga Demos pavanoona zvakakodzera nenzira yakajairika, kunyangwe ivo vasingazove nerutsigiro rwavachafarira pamwe neSteam Game Mutambo chiitiko.
Kana zvakadaro Vatambi, uyu mutambo wevhidhiyo mutambo unoreva kuve nemazuva mashoma ekugona kuyedza inotevera mitambo mahara. Pamusoro pekutarisa nhepfenyuro dzepamoyo kubva kune vanogadzira, kutaura navo, uye nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Steam Game Mutambo: yatove nezuva!
Python musiki achashandira Microsoft
Vhura CASCADE Technology 7.5.0 inouya neinopfuura mazana mana ekuvandudza nekugadzirisa